पीवीसी नली श्रृंखला FAQ - पाओटिंग Mingwang सिंचाई उपकरण कं, लिमिटेड
के आकार पीवीसी फिटिंग मलाई चाहिन्छ?
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जब संग काम पीवीसी पाइप र फिटिंग नाममात्र छ आकार। ए १ " फिटिंग १ मा फिट हुनेछ " पाइप, चाहे पनी या त एक अनुसूची ४० वा is० हो।
के यो तातो पानी को लागी पीवीसी पाइप को उपयोग गर्न को लागी ठीक छ?
को मुख्य कमजोरी पीवीसी पाइप यो तथ्य हो कि यो हुन सक्दैन प्रयोग गरियो संग तातो पानी अनुप्रयोगहरु। जब पर्दाफास हुन्छ तातो पानी, पीवीसी ताना हुनेछ।
पीवीसी नली लचीलो छ?
जब धेरै मानिसहरु सोच्छन् पीवीसी, उनीहरु कडा सेतो र खैरो पाइपहरु को बारे मा सोच्छन् कि उनीहरु आफ्नो घर नलसाजी प्रणाली मा प्रयोग गर्छन्। अझै पीवीसी धेरै बहुमुखी सामग्री हो, र यो हुन सक्छ लचिलो साथै ठोस। को लम्बाइ लचिलो पीवीसी पाइप तपाइँ लाइनहरु चलाउन को लागी बहुमुखी प्रतिभा दिन सक्नुहुन्छ जहाँ कठोर पाइपहरु जाने छैनन्।
पीवीसी नली ईन्धन प्रतिरोधी छ?
सक्छ पीवीसी र अन्य प्लास्टिक नली इन्धन र को लागी प्रयोग गरीन्छ ग्यास? छोटो मा, जवाफ छैन, उनीहरु सक्दैनन्। ... को प्रकृति को कारण पीवीसी र अन्य प्लास्टिक को रूप मा राम्रो संग, तिनीहरू राम्रो संग प्रयोग को लागी उपयुक्त छैनन् इन्धन ग्यास वा केरोसिन। पीवीसी र अन्य प्लास्टिक उच्च तापमान वातावरण मा सजीलो विकृत, र लीक वा टुट्न सक्छ
के दीमक लचीला पीवीसी खान्छन्?
यो कीराहरु को लागी प्रतिरोधी छैन, विशेष गरी, दीमक थाहा भएको छ खाऊ यो। अनुसन्धानले देखाएको छ लचिलो पीवीसी गर्छ आकर्षित छैन दीमकतर, यदि लचिलो पीवीसी बीचमा राखिएको छ दीमक नेस्ट र एक खाना स्रोत, उनीहरु कोसिस गर्न सक्छन् खाऊ यसको माध्यम बाट उनीहरुको बाटो